Maxaa Gabadhani Yar Loogu Bixiyey Karoona? | Xaqiiqonews
Maxaa Gabadhani Yar Loogu Bixiyey Karoona?
Sheekada Karoona ayaa u muuqata mid bulshada mashquulisey, heer dad qaar ay la soo baxeen dhaqamo iyo ficilo cajiib ah, arintii ugu yaabka badneyd waxaa ku kacay qoys Hindi ah oo gabdhooda cusub u bixiyey magaca “karoona”
Qoyska dhacdadan sameeyey ayaa ku dooday in sababta gabdhooda magacan baas ugu bixiyeen in ay tahay “sama saadsi”,iyo in laga fiiriyo dhanka wanaagsan ee cudurka, madaama cudurkani dadaalkiisa uu mideeyey dunida oo dhan.
Qoyska oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ay rajeynayaan in gabadhooda ay noqoto calaamadda midnimada ee mideyn laheyd Hindiya si loola dagaalamo xumaan oo dhan.
Karoona habaryarteed oo saxaafadda la hadashay ayaa sheegtay in cunugtani yar la dhalay waqti Hindiya ay ku jirtay xaalad bandaw ah, taasi oo ku qasabtay in ay dhib badan kala kulmaan markii hooyada loo waday Isbitaalka dhalmada.
Sidoo kale Abtiga Cunugtan ayaa isna carabka ku dhuftay in uu filnaayo in gabarta walaashiis ay noqoto midnimada Hindiya, isagoo adkeeyey in gabdhani ay dhalatay waqti Dalka Hindiya uu ku jiray dagaal mideysan oo ka dhan ah Karoona.